INFORMATION famoriam-bola sy ny fampiasana
NY FANAZAVANA ARO
Shanghai Besca Industrial Co., Ltd manaja ny fiainana manokana sy ny miantoka ny fiarovana an-tserasera ho zava-dehibe. Mba hanome anao ny tsara indrindra vokatra, mahomby mpanjifa, ary ny fifadian-kanina vaovao, dia tsoratra isan-karazany ny vaovao avy amin'ny fitsidihana ny toerana. Mba hiarovana tsara kokoa ny fiainany manokana, dia te-hanazava ny vaovao an-tserasera ny fomba fanao sy ny vaovao nangonina sy no ampiasaina.
Misaotra anao fahazoana ny tranonkalan'ny (toerana adiresy: https://www.bescatray.com/ ). Manaja ny fiainana manokana izahay, ary te hiaro ny mombamomba. Raha tianao ny hahafantatra bebe kokoa, dia vakio ny Privacy Notice
Mariho Privacy ity dia manazava ny fomba manangona, ampiasaina, ary (eo ambany fepetra sasany) mamboraka ny mombamomba. Izany Privacy Jereo koa dia manazava ny dingana efa naka isika mba hahazoana ny mombamomba. Farany, ity Mariho Privacy manazava ny safidy momba ny famoriam-bola, fampiasana, sy ny fampiharihariana ny hevitry ny mombamomba. Amin'ny alalan'ny fitsidihana ny Site, ianao manaiky ny fanao voalaza ao Zavatra.
Mariho ity Privacy natao ho an'ny Site ity. Io politika fiainana manokana dia tsy voatery mihatra ny ivelan'ny aterineto fanangonana ny mombamomba. Jereo eto ambany ho an'ny antsipirihany. Isika tsy tompon'andraikitra afa-po na ny fomba fanao eo amin'ny fiainana manokana izay hitenenan'izay https://www.bescatray.com/ tranonkala izay Site ity ny rohy na ny rohy ho an'ny toerana.
1. Information Collection. Tsy manangona vaovao avy aminao amin'ny fomba maro samy hafa ao amin'ny Site ity. Tanjona iray eo amin'ny fanangonana vaovao avy aminao manokana dia ny hanome ho mahomby, misy heviny, ary namboarina traikefa. Ohatra, afaka mampiasa ny mombamomba ny:
Ampio ho mora kokoa izany Site ho anao ny mampiasa ny tsy manana ny hiditra fanazavana indray mandeha indray.
Hanampy anao hahita fanazavana haingana, vokatra, sy ny tolotra.
Ampio izahay mamorona afa-po eto amin'ity Site izay tena manan-danja ho anao.
Mampitandrina anao fanazavana vaovao, vokatra, sy ny tolotra izay atolotsika.
Matetika, tsy tokony hanome ny mombamomba mba hitsidika tranonkala ity. Na izany aza, mba hanatsarana ny kalitaon'ny asa fanompoana, ny orinasa dia mety hitaky anareo mba hanome ny mombamomba mba hahatonga ny Company hahatakatra bebe kokoa ny zavatra ilaina mba hanompo anareo, izany fotoana izany, ny Company dia mitondra ny lohateny hoe mba handray fepetra mba hanamarinana ny mombamomba anao manome maha-azo itokiana. Raha manome ny mombamomba ny hafa, dia efa nanao fankatoavana ofisialy ny olon-kafa. Ny orinasa teny fikasana, raha tsy noho ny faniriany manokana, ny orinasa dia tsy mitovy ny vaovao manokana ho an'ny orinasa sy ny mpiray na inona na inona antoko fahatelo.
2. Information Fampiasana sy Disclosure.
(a) Fampiasana anatiny. Mampiasa ny mombamomba ny fandraisana ny filaminana sy manome anao amin'ny mpanjifa. Mety anatiny mampiasa ny mombamomba mba hanatsarana ny Site ny votoaty sy ny fisehon'ny, mba hanatsarana ny fanentanana sy noho ny ezaka manokana barotra (anisan'izany ny ara-barotra ny asa sy ny vokatra ho anareo), ary mba hamaritana ankapobeny tsena vaovao momba ity Ndao ho mpitsidika.
(b) Communications miaraka aminao izao: Misy dia hampiasa ny mombamomba miresaka aminao momba ny toerana, sy ny didinao sy ny fiterahana. Koa, mba handefa mailaka anao fanamafisana rehefa misoratra anarana miaraka aminay.
(c) Fampiasana ivelany. Te-hanome anao ny tsara asa fanompoana sy ny hanaterana anao lehibe fantina - hivarotra entana izahay voalohany indrindra, fa tsy vaovao. Tsy mivarotra, hofan-trano, ny varotra, fahazoan-dàlana, na raha tsy izany mamboraka ny mombamomba manokana na ara-bola vaovao ho na iza na iza.
Site ity incorporates ara-batana, elektronika, ary ny fitantanana fomba fiasa mba hiaro ny tsiambaratelo ny vaovao manokana, anisan'izany ny Secure Sockets Layer ( "SSL") ho an'ny rehetra fifanakalozana ara-bola amin'ny alalan'ny Site ity. Mampiasa SSL encryption mba hiarovana ny mombamomba an-tserasera, ary izahay kosa mandray dingana maro mba hiarovana ny mombamomba eo amin'ny toerana. Access ny mombamomba no voafetra. Mpiasa ihany no mahazo izay mila ny mombamomba mba hanao asa manokana iray dia omena fahafahana ny mombamomba. Farany, dia miantehitra amin'ny antoko fahatelo-mpanome tolotra ho an'ny fiarovana ara-batana ny sasany ny fitaovana solosaina. Mino isika fa ny fomba fiarovana dia ampy. Ohatra, rehefa mitsidika ny Site, dia mahazo lohamilina izay foana ao anaty ahiahy tontolo ara-batana, mihidy ambadiky ny tranom-borona sy ny elektronika Firewall.
Na dia mampiasa ny orinasa-standard fepetra mba hiarovana ny vaovao manokana, tsy afaka miantoka ny fiarovana tanteraka. 100% ny fiarovana tanteraka ankehitriny no tsy misy na aiza na aiza amin'ny aterineto na ivelan'ny aterineto.